အမေဇုံ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Wi-Fi အကွာအဝေးကို 15 $ - BGR - TELES RELAY တွင်ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ Amazon ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Wi-Fi အကွာအဝေးကို 15 $ - BGR သို့ပြန်ပေးသည်
အမေဇုံတွင် Wi-Fi တိုးချဲ့မှုများသည်အလွန်ရေပန်းစားသည်၊ အကြောင်းမှာငွေအမြောက်အများမဖြုန်းပဲသင်၏အိမ်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုတိုးချဲ့ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အမေဇုန်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဒေါ်လာမော်ဒယ်ကိုဒေါ်လာ 15 ဖြင့်သာရောင်းနေသောကြောင့်ငွေအမြောက်အများမဖြုန်းတီးခြင်းသည်ယနေ့အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည်။ ၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ TP-Link WA855RE ဝိုင်ဖိုင်အကွာအဝေးတိုးချဲ့သူ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးအမြန်နှုန်း 300 Mbps အထိအထောက်အပံ့ဖြင့်သင်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုတိုးချဲ့ပါ။ သို့မဟုတ်လျှင်သင်အမှန်တကယ်မြန်နှုန်း၊ ဗားရှင်းလိုအပ်ပါက တိုးတက်လာသော 750 Mbps ယခု 22,99 ဒေါ်လာဖြင့်သာရောင်းမည်!
UNIVERSAL ကိုက်ညီမှု - မည်သည့်ကြိုးမဲ့ router၊ gateway သို့မဟုတ် cable modem နှင့်မဆို WiFi ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်
အဆိုပါစမတ်အလင်းအိမ်အကောင်းဆုံးနေရာချထားသေချာကူညီပေးသည်။ Router ကိုနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအဧရိယာအကြား installed ရပါမည်
POS၊ အင်တာနက်၊ ဂိမ်းများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ Alexa၊ Echo နှင့်အခြားအပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးအတွက်တည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှုများတပ်ဆင်ရန်အမြဲလွယ်ကူသည်။
စံအကွာအဝေး extender နှိုင်းယှဉ်
အဆိုပါ Ethernet port ကိုဘရော့ဘန်းအဘို့သင့်ကွန်ယက် Gigabit ကြိုး devices တွေကိုချိတ်ဆက်
TP Link ကို7ဆက်တိုက်နှစ်တာကာလအတွင်းစားသုံးသူများအတွက်ကြိုးမဲ့န်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးသည်။ IDC မှအစီရင်ခံစာ Q2 2018 အဆိုအရ
ပြဿနာများကို အကယ်. configuration ကိုကာလအတွင်းသို့မဟုတ်အပြီးတွင်ပြဿနာများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ TP Link ကို224 ရက်ပေါင်းတစ် 24 နှစ်ပေါင်းအာမခံချက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု77 နာရီကမ်းလှမ်း
Amazon သို့မဟုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရောင်းချသူရောင်းချပျနှံကွတစ်ခုတည်းသောထုတ်ကုန်များ (ခွင့်ပြုချက်၏စာတစ်စောင်တောင်း) အာမခံနှင့်အကူအညီအရည်အချင်းပြည့်မီ
လိုက် လိုက် Twitter ပေါ်တွင် @BGRDeals web ပေါ်မှာနောက်ဆုံးပေါ်အပေးအယူအတိုင်းလိုက်နာရန်။ ပမာဏကန့်သတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြပြီးကူပွန်မည်သည့်အချိန်တွင်မကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။ တချို့ကကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးဖောက်သည်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ BGR ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ထားရှိအမိန့်အပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အဆိုပါ extension ကို
Dirty သည် Lenovo မှ2$ သို့ပြောင်းလဲနိုင်သော 1 ရှိအကောင်းဆုံး Chromebook 247 ကိုလျှော့ချပေးသည် - BGR
ဂျူလီ Depardieu မနာလို? Philippe Katherine ၏ဇနီးမောင်နှံအားနူးညံ့သောယုံကြည်မှု
အိန္ဒိယ - Rajnath သည်အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံများမှကောင်တာများနှင့်နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံမှု | အိန္ဒိယသတင်း
Jeff Panacloc: "တီဗွီမှာဟာသဆိုတာတစ်ခါတလေမေ့သွားတယ်။ - ဗီဒီယို
လူဇင်ဘတ် vs. ပေါ်တူဂီ - ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှတ်တမ်း - 17 နိုဝင်ဘာ 2019 - ESPN
Roblox JailBreak သည် 1 ရဟတ်ယာဉ်တစ်သန်းအတွက်ဖြစ်သည် Roblox JailBreak | C - ဗီဒီယို
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,619